Dad Kala Didsan, Dano Shisheeye & Dal Hodan Ah ?
Alaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Dadka Bani’aadamka ah ayaa ku kala duwan fikirka , Garaadka , Aqoonta , Farsamada , Hanka iyo Hal abuurnimada Iyo caqliga Waa sida uu eebe u abuuraye Balse waxyaabaha dunida iyo Quburada cilmiyada Bulshada ( Sociology) & Cilmi Nafsiga Bulshada (Social Psycholgy) Wax ka dhigtaa eey la yaabeen...
Islaamka Miyaa Dumarka Sharafta Siiyay Mise 8 Marso!
Waxaan ku bilaabayaa Eebe wayne magicii naxariis iyo nabadgalyo Nabi Maxammad csw korkiisa ha ahaato. intaaa kagadaal waxaan rabaa qormadaan inaan kusoo qaato tusaalooyin badan oo aan kasoo guuriyay Qur’aanka Kariimka ah iyo Axaadiista rasuulka csw, waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa taariikh kamid ah gabdhihii ku barbaaray hurumarka islaamka maggacana kuyeeshay. Waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa...
Halkudheg: 8 marso